Dị ka onye na-emepụta ụwa maka obere ngwongwo anticancer reagents na mmechi mmechi, Cofttek na-enye ọtụtụ puku ogige na mahadum, ụlọ ọrụ ọgwụ na ụlọ ọgwụ na-emepụta ọgwụ. Na nyocha nke ọgwụ, Cofftek na-enye omenala, nkwekọrịta na ịmepụta ngwaahịa dị elu. Anyị na-arụ ọrụ iji wuo nchịkọta kachasị nke ụwa nke obere obere anticancer. Cofftek bụ na ike uru na chemical mmepe, mma akara, oru ngo na ahịa ...
Ntọala nke Onye Okike
"Cofttek bụ ISO 9001: 2008 kwadoro ya na ọrụ ya niile na-arụsi ọrụ ike na njikwa ụkpụrụ omume zuru ụwa ọnụ."
Ndị isi ndị isi ụlọ ọrụ ahụ nwere doctorates na organic kemist. Karịa afọ 10 na-arụ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ ọgwụ chemical. Ahụmahụ bara ọgaranya na nkà na-arụkọ ọrụ ọnụ, kemịkal ọgwụ, ahaziri ahazi na njikwa ọrụ .Ọka karịa 80% nke ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ọha na eze nwere ogo mmụta bachelor, ọkara n'ime ha nwere akara mmụta. Ha niile bụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ.